Bose Sleepbuds: Igweisi maka ezigbo ụra | Akụkọ akụrụngwa
Bose Sleepbuds: ekweisi-akagbuo ekweisi maka ezigbo ụra
Eder Esteban | | Ngwa, Noticias
N'ikpeazụ ha na-oru na ahịa. Bose na-ebupụta ekweisi ya kachasị iche iche. Ọ bụ maka Bose Sleepbuds, ekweisi nwere nke dị iche karịa ihe akara a na-enyekarị. Ebe ọ bụ na emebere ha iji belata mkpọtụ ka ị nwee ike hie ụra nke ọma. Na mgbakwunye, ọ bụ ngwaahịa pere mpe ha megoro.
Ọ bụ ya mere, Ndị a Bose Sleepbuds na-eji teknụzụ ọhụrụ maka ika ahụ. Yabụ mmepe na nrụpụta ya bụụrụ ụlọ ọrụ ahụ ihe ịma aka. Mana ha mechara ruo ahịa ma ndị ọrụ niile nwere mmasị na ha zụrụ ugbu a.
Isi ihe dị iche bụ teknụzụ eji eme mkpọtụ ejirila na ekweisi ọhụrụ ndị a. Ebe ọ bụ na ha bụ ngwaahịa mbụ Bose mepụtara iji ya. Ihe teknụzụ a na - eme bụ na Sleepbuds nwere ikike igbochi, ikpuchi ma dochie mkpọtụ iwe. Ya mere, ị ga-enwe ike izu ike n'abalị.
Ọzọkwa, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, ụra a na-ehi ụra abụghị ụdị mkpọtụ ọcha na-acha ọcha nke ụdị ndị ọzọ na-enye. Kinggba ụzụ na-eme mkpọtụ dị mma karịa ịkagbu mkpọtụ n'ọtụtụ ọnọdụ. Yabụ, ndị a Bose Sleepbuds dị mma iji eyi mgbe ị na-ehi ụra. Ọbụna ma ọ bụrụ na i dinara n'akụkụ gị, ị ga-enwe ike iji ha n'abalị.
Ha nwekwara egwu ihi ụra 10 e mere maka imeghari ka ụda mkpọtụ. Bụrụ ha doggba nkịta, mkpọtụ okporo ámá dịka okporo ụzọ, ma ọ bụ ikwo ụra onye ozo. Ya mere, egwu ndị a na-ehi ụra nke zoro n'okpuru akwa ọzọ nke ọdịyo, ụda ọ bụla nke na-eme ka anyị mụrụ anya na-akagbu kpamkpam.
Bose Sleepbuds adịlarị ire na United States. Na mba a erere ha na ego nke $ 249. N'oge ahụ, ekpughebeghị ụbọchị ha ga-ere ya na Spain, yana ego ole ha ga-eme ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Bose Sleepbuds: ekweisi-akagbuo ekweisi maka ezigbo ụra
XboX One X maka euro 189,95. Nke a bụ imeghari atụmatụ na egwuregwu na-enye anyị
Nke a bụ atụmatụ ịgbaso nkọwa nke NASA ma ọ bụrụ na ikuku kpakpando kụrụ ụwa